Nangona abafazi banombono wokuthi amadoda afuna ukulala ngesondo - akunjalo. Isiqingatha esomeleleyo sabantu sisoloko sinokuyeka ngokupheleleyo ukuzonwabisa okunjalo. Kwaye kukho izizathu zezi, esiza kuxoxa ngazo kweli nqaku.
I-priori, indoda isoloko ifuna umfazi omhle. Kwaye ukuba ngokungazelelwe akayifunayo, kuthetha ukuba le ntokazi ayilungele ngokwaneleyo, okanye le ndoda ayinamandla. Umfazi kuphela onokukwazi ukuba "nale ntsuku", unokuphelelwa yimihla yokusebenza nzima, unokufumana intloko. Kwaye ngamadoda, ngokucacileyo, akufanele kube njalo! Uyavumelana ukuba le nto iphosakeleyo? Kodwa abaninzi abafazi abakucingi njalo.
Ngokuqhelekileyo, kukho izizathu zokugatya i-cutoff bobabini abalingani kwaye banokuba nokuba nenjongo. Ziziphi iimeko eziphoqelelwa amadoda ukuba alahle ukutshata?
Ukuba ufuna ukuba iqabane lakho lihlale lizinkathazo, ke ungcono ukhethe i-vibrator. Ngenxa yokuba isimo sengqondo somfazi sitshintsha kakhulu kwaye kwenzeka ukuba umntu akalalanga ngesondo. Izizathu zezi zinto zinokuba buninzi. Kodwa oku akuthethi ukuba umntu uyeka ukunithanda.
Ngamanye amaxesha amadoda angumsebenzi womsebenzi osasazeka emva kokuba usuxakeke kuphela umnqweno wokutya kunye nokulala. Kwaye thina bafazi simele siyihlonele le mnqweno, kuba nathi sinemihla enjalo xa sifuna nje ukugumbana nokulala.
Ngomso kuya kuba ngumsebenzi onzima
Esinye isizathu esinokwenzeka sokungafani ngesondo ngumhla onzima kusasa emsebenzini. Ngokomzekelo, ukuhanjiswa kweprojekthi ebalulekileyo okanye ukupheliswa komsebenzi omkhulu. Ukuba umntu wakho uhlala ephazamisekile, ekhululekile kwaye evuya ngexesha lesini, ngoko isondo ngeparatut yakho iya kuba luncedo kuphela. Kwakhona, unokukhulula ngekhompyutheni okanye kwi-TV, kulo mzekelo musa ukubeka ingcinezelo enkulu kuye. Le ndoda ingummeli, ngoko uyayithatha ngokungqongqo. Olunye ukhetho lokuhlwa ngaloo ndlela-uya kuba apha emsebenzini, ngaphandle kokuphazamiseka nayiphi na into engaphandle, iya kulungiswa, ngamanye amagama. Kule meko, ngokuqinisekileyo akufanele ukuphazamiseka, kodwa kunokuba umlungiselele itiye elimnandi.
U xakeke kakhulu
Esi sizathu sifana nesokuqala, kodwa ngokwahlukileyo umntu ayenako kwaye ufuna, kodwa akunjalo. Ieto "ayikwazi" ngokuqinisekileyo kuphela ekuqondeni kwakhe. Ngesi sizathu, unokudibanisa, okanye, ngokuthe ngqo, ncedise ukuphumla. Cacisa ngokucacileyo ukuba emva kwesondo, kuya kuba ngcono kwaye kuphuculwe. Unako ngexesha elifanayo ukumnceda ekujonganeni namaxesha asebenzayo, ukuba kukho. Uya kuwuxabisa, kholwa kwam.
Ngokuqhelekileyo, utywala kunye nolwabelana ngesondo, ingakumbi ukuba udibana nohlobo olutshanje. Kuba isibini esiphila kunye iminyaka engaphezu konyaka, utywala luya kukhuthaza kuphela ukutshatyalaliswa kwamanani amancinci. Amanzi amaninzi okutywala utywala akukona nje ngesondo kuphela, kodwa impilo. Kwinqanaba elithile lokuxhatshazwa, indoda yakho iya kufuna ukuba isondo, kodwa mhlawumbi ngeke uyithande.
Musa ukuyikholelwa, kodwa ngamanye amaxesha amadoda ayenayo "intloko." Unokubamba ubanda obubi - oku kukuphazamisayo kwaye kunomdla wokulala okanye ukulala. Kucacile ukuba kwimeko enjalo ngokuqinisekileyo akayi kuthanda ukwenza uthando kuwe. Kufuneka unakekele kwaye unothando. Kodwa ukuba umntu wakho kaninzi "uyabuhlungu", kufuneka uqikelele kwaye uxoxe naye. Into ephambili - ungathuli, u-Zataivobid.
Ngoku siza kuxubusha nawe ngezizathu ezivakalayo zokungavumi ngesondo, mhlawumbi ngokugqithiseleyo. Kukho uhlobo oluthile lwabantu abangenakuyeka umkhwa wokuhlaziya i-masturbating, efunyenwe ukususela ebusheni. Isizathu sokwaneliseka ngokwabo sinokuba luvila oluqhelekileyo. Ngenxa yokuba isondo ngamadoda - le yindlela yokwenza umonakalo kuphela, okufuna ukuba "ukujuluka" kakhulu, kungekhona nje kuphela. Ngako oko, umntu onjalo ucinga, kwaye kutheni ukukhathazeka nangenxa yeqabane, ukuba unokufumana okokuzonwabisa. Emva kwakho konke, emva komsebenzi onjalo wesondo, awudingi ukukubona ekhaya, biza itekisi ... kwaye unokulala, ujika eludongeni, ungathethi nantoni na.
Ngomlingani onjalo, kufuneka kwakhona ukuchaza yonke into. Zama ukubonisa indlela owonwabileyo ngayo. Sebenzisa ixesha elifutshane kwaye "ufundise" kulowo onika unonwabo olukhulu kwaye ekugqibeleni ukhokelela ekugqibeleni - kuya kuba ngumvuzo omkhulu. Le ndoda iphinda iziva iyimfuneko kwaye iya kuqonda ukuba i-masturbation ayikho indlela elula.
Ukulahlekelwa ngumdla kwimisebenzi yesondo
Le ngxaki yengqondo nayo inokwenzeka, imbangela yayo ingaba yincithakalo yokuziphatha neyomzimba, kwaye ngamanye amaxesha kukho inani lokungaphumeleli kwisicwangciso esisondeleyo. Ukuba awuzange ulale ngesondo ixesha elide kwaye uya kuba ungalindelekanga, ngoko ngokuqinisekileyo ixesha lokugqiba into ethile. Unokuthetha nomyeni wakho, zama ukufumanisa into engafanelekanga kwaye uyayibona indlela ephuma ngayo kule meko okanye uphendulele kwisifo somzimba. Ukuba uxabisa umtshato wakho, ingxaki kufuneka ixazululwe kunye.
Awuvuyi iqabane okanye umfazi
Ukuba emva komtshato ufumene ubunzima obunzima, ungabukeli ukubukeka kwakho, hambathisa ingubo engcolileyo, khumbula ukuba konke oku kunokunqanda umnqweno wesondo nawe. Indoda yakho ifuna isondo, kodwa, njenjalo, yithwala. Kule meko, uya kuqala ukuthenga amaphephancwadi angabonakaliyo, ukubukela i-pornography, kwimeko enzima kakhulu eya kufumana inkosikazi. Ukutshintsha imeko, umele ukhumbule ukuba emva kwesitampu kwipasipoti okanye ekuqaleni komtshato obambisene nomtshato womtshato, akukho nto iguquka. Ibhinqa kufuneka liqhubeke nokuzibeka iliso, limele kwaye lihlale lihle kwaye lilungele kakuhle.
Kwenzeka ukuba le ndoda iphilile, isebenza kakuhle emsebenzini, ekhaya lihle kwaye liyingqongquthela, kwaye i-potency ilungile, kwaye ayifuni ukulala ngesondo.
Kungenzeka ukuba indoda yakho - inxexual and activity intimate for him is soul talk. Ufuna nje ukuzikhusela kwisini, njengento eshiwo ngubudlelwane be-platonic. Ukuba umntu wakho ufana nelo, kwaye awuyiyo inxube, yilungiselele ukuba uya kufuneka uzame kancinci ukuba "ubuyele" kumsebenzi wesondo oqhelekileyo. Ukuba amatyala enqatshelwe ahlukeneyo, ke akukho mfuneko yokwethusa. Kwaye ukuba yonke into iyahluke, ngoko kufuneka uxoxe nomntu, kuphela ngaphandle kokuhlambalaza kunye nokuhlambalaza. Okanye ukujongana neengcali.
Kule nqaku, uninzi lweengcebiso zisekuxoxeni-zinokukunceda kwiimeko ezininzi.Ngokuba ukungaqondani phakathi kwezibini zikhokelela kwiimeko ezinje.Thetha uphinde usebenze isicwangciso sokuxazulula iingxaki zakho kunye, nangona oku kungabi lula kwaye ngamanye amaxesha kuthatha ixesha elide, kodwa kumntu onothando wobunzima kwaye ixesha alikho.
Ukusebenzisa amathoyizi eentlobano njengendlela yokwenza ulwahlulo lobomi bezesondo
Impembelelo yesini kwiqumrhu lesetyhini
Ukuphuhliswa komzimba komntwana kunyaka wokuqala wobomi
Iifomo kumfazi okhulelwe
Iintlobo ezahlukeneyo zothando. Yaye unjani uthando?
Imiqulu ebomvu kunye ne-salmon
Palermo - intyatyambo yowunxweme lwaseTyrrhenian
Apple Cocktail Shake
I-Shrimp Pico de Gallo
I-Sandwich ngemizuzu eyi-10
Uneminyaka engakanani ongayifundisa umntwana wesiNgesi?